Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ụlọ oriri na nkwari akụ Hawaii na -akwado ihe karịrị ijeri $ 1 ijeri
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ebe ụlọ oriri na ọ Hawaiiụ Hawaiiụ Hawaii na-akwado nkwado maka nnukwu mfu, Okwu Ndị Nnọchiteanya US na Kahele na-akwado ego iji nye ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ aụilingụ enyemaka enyemaka ezubere iche.
A na -atụ anya na ego njem njem ụlọ nkwari akụ Hawaii ga -agbadata pasent 77 na 2021 ma e jiri ya tụnyere ọkwa 2019.
Njem azụmaahịa, nke gụnyere ụlọ ọrụ, otu, gọọmentị na ụdị azụmaahịa ndị ọzọ, bụ nnukwu ụlọ ọrụ nkwari akụ kacha enweta ego.
A na -atụ anya na ụlọ nkwari akụ ga -akwụsị 2021 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ 500,000 ma e jiri ya tụnyere 2019, gụnyere ihe karịrị ọrụ 12,500 furu efu na Hawaii.
Iilọ nkwari akụ nke Hawaii na -atụ anya ida $ 1.18 ijeri na njem njem azụmahịa na 2021, gbada 77.4% atụnyere ọkwa 2019, dị ka akụkọ si nso nso a si Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ American & Lodging Association (AHLA).
A na -atụ anya ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ mba ahụ ga -akwụsị 2021 karịa $ 59 ijeri ego njem njem azụmaahịa ma e jiri ya tụnyere 2019 mgbe furu efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 49 na 2020.
Nyocha ọhụrụ a na-abịa n'azụ nyocha AHLA n'oge na-adịbeghị anya, nke chọpụtara na ọtụtụ ndị njem azụmahịa na-akagbu, na-ebelata ma na-eyigharị njem n'etiti nchegbu COVID-19 na-aga n'ihu.
Iji gbatịa ndị ọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ iji nye aka dị mkpa iji dị ndụ ruo mgbe njem ga-alaghachi na ọkwa ọrịa tupu ọrịa amalite, ndị nnọchi anya US Ed Case (HI-01) na Kaiali'i Kahele (HI-02) abanyela aka dị ka ndị nkwado. Iwu Save Hotel Jobs, iwu dị ugbu a n'ihu Congress nke ga -eduzi 100% nke ego ya iji dobe ndị na -arụ ọrụ na họtel.
Njem azụmaahịa, nke gụnyere ụlọ ọrụ, otu, gọọmentị, na ụdị azụmaahịa ndị ọzọ, bụ isi mmalite nke ụlọ ọrụ nkwari akụ nke a na-atụghị anya na ọ ga-eru ọkwa ọrịa tupu 2024. Enweghị njem azụmahịa na ihe omume nwere nnukwu mmetụta maka ọrụ, ma na -egosipụta mkpa ọ dị maka enyemaka gọọmentị etiti ezubere iche, dị ka Save Act Jobs Act.
A na -atụ anya na ụlọ nkwari akụ ga -akwụsị 2021 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ 500,000 ma e jiri ya tụnyere 2019, gụnyere ihe karịrị ọrụ 12,500 furu efu n'ime Hawaii. Maka mmadụ iri ọ bụla na-arụ ọrụ ozugbo na ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-akwado ọrụ 10 ọzọ na obodo, site na ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ahịa na-eweta ụlọ oriri na nkwari akụ-nke pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ọrụ 26 na-akwado ụlọ oriri na ọ areụ areụ dịkwa n'ihe ize ndụ na mba ọ gwụla ma Congress mere.